Isusa izinwele ezinjeni, khohlwa izinwele kusofa, iragi ... | Izinja Umhlaba
Ukuba nenja kuhilela izinto eziningi ezinhle: kukuvusa ekuseni, kukuphelekezele ukudla kwasekuseni, bese kukulinda ukuthi ubuye uzochitha isikhathi nawe. Inkinga ukuthi kwesinye isikhathi isikhathi asichitha ekhaya simenza agunde izinwele. Kuthiwani uma lokhu kusofa? Noma ezingutsheni zakho? Impela, udinga okokukhipha izinwele.
Uma ufuna ukwazi ukuthi yikuphi okukhonjiswa kakhulu nokuthi ungathenga kuphi okususa izinwele endaweni ngayinye endlini yakho, sikunikeza lonke ulwazi oludingayo.
1 Izisusa izinwele ezihamba phambili
2 Izinhlobo zokususa izinwele
2.1 Isusa izinwele kukhaphethi, izingubo nosofa
2.2 Iroli yokususa izinwele
2.3 Izinwele zokususa izinwele
3 Ungayivimbela kanjani inja yakho ekuchitheni izinwele ezingaka
4 Izindawo endlini lapho kuhlala kunezinwele njalo
5 Ingabe ukukhipha izinwele kwezinja kuyasebenza?
6 Ungathenga kuphi okokukhipha izinwele
Izisusa izinwele ezihamba phambili
Nayi inketho yokususa izinwele esazi ukuthi siyasebenza futhi ongasusa ngayo kalula izinwele ezishiywa yinja yakho yonke indawo:
I-ACE2ACE Remover Yezinwele kanye ...
I-AOGUERBE isusa izinwele futhi ...
Isinwele Esisusa Izinwele ...
Izinhlobo zokususa izinwele
Emakethe awutholi kuphela uhlobo lokususa izinwele, kepha unamamodeli amaningana atholakalayo. Ezinye zigxile kakhulu endaweni ethile, njengezingubo, omata, njll. Ngenkathi ezinye zikhona jikelele, ukukwazi ukuzisebenzisa ngokujwayelekile. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi iziphi ezikhona?
Isusa izinwele kukhaphethi, izingubo nosofa
Ukuba kukhulu, kukuvumela ukumboza indawo enkudlwana. Imvamisa zisuselwa kufayela le- uhlelo lwe-roller, kodwa kukhona okunye okuyinkimbinkimbi kakhulu kunamanye, njengalawo aqoqa izinwele azidlulisele endaweni ukuze ihlale ihlanzekile.
Iroli yokususa izinwele
Ziqukethe isilinda esijikelezayo, esivame ukunamathela noma lapho izinwele zenja zinamathela kuzo ukuzisusa ebusweni.
Lokhu kungenye ye ilungele izindawo ezincane neziphakathi nendawoNjengoba i-roller idlula, ilahlekelwa ukunamathela njengoba igcwala izinwele.
Enye inkinga ukuthi, lapho izinwele sezinamathele, kungaba nzima ukuhlukanisa futhi ekugcineni kuphele (kusebenza kuphela ukusetshenziswa okumbalwa).
Izinwele zokususa izinwele
Lokhu kungabizi kakhulu futhi kwaziwa kunakho konke. Iqukethe i- Isusisi sezinwele ngesandla esinendawo ende okufanele usidlulise ulandela inkomba ekhonjisiwe ukwazi ukususa izinwele ezingutsheni noma kunoma iyiphi enye indawo.
Ngemuva kwalokho, kufanele uyibeke kuhlobo lwebhokisi oluhlukanisa izinwele nebhulashi elizosetshenziswa futhi sengathi lusha.
Ungayivimbela kanjani inja yakho ekuchitheni izinwele ezingaka
Kukhona ngempela izimbangela ezahlukahlukene zenja ekhipha izinwele. Ezinye zivamile, njengokuthi iphakathi nendawo ekuchithekeni izinwele, noma ukuthi isilwane uqobo lwaso sithambekele ekulahlekelweni izinwele (njengoba kunjalo ngabantu). Ezinye zibangelwa ezinye izizathu, njengezifo zezinambuzane, ukungadli kahle, ukucindezeleka ...
Ngokuvamile, ukulahleka kwezinwele akudingi ukwelashwa, kunalokho, kufanele uzame ukwazi imbangela yokuzama ukukuqeda nokuthi isilwane siyeke ukudonsa izinwele zaso. Lokhu kusho:
Bheka ukuthi ukudla kwanele yini. Uma kunjalo, uzobona ukuthi izinwele zenja yakho zithambile, ziqinile, ziyacwebezela futhi ziluhlaza.
Phatha isibungu sangaphakathi nesangaphandle. Ukuvimbela ama-parasites ekuphazamiseni impilo yakho.
Sebenzisa imikhiqizo ethile ukuhlanzeka kwakho. Ngokuqondile, i-shampoo ekhonjiswe izinja futhi ayiyenzi ngokweqile kubhavu (eyodwa-ezimbili ngenyanga yanele).
Ukubaluleka kokuxubha. Ukuxubha nsuku zonke, noma amahlandla amaningi ngeviki, kubaluleke kakhulu, ngoba awususi kuphela izinwele ezifile esilwaneni sakho (futhi ngalokho akusishiyi phansi, izingubo, usofa, njll.) Kepha uchitha isikhathi nakho.
Thola imbangela yenkinga. Isibonelo uma kwenzeka ucindezelekile, uvalo ...
Khumbula ukuthi izinja zishintsha amajazi azo kabili ngonyaka, ukuzivumelanisa namazinga okushisa aphezulu noma aphansi. Futhi, kukhona abanye abanesikhumba esibucayi kakhulu.
Izindawo endlini lapho kuhlala kunezinwele njalo
Inja endlini, sithanda singathandi, izokhipha izinwele. Ngaphandle kokuthi lena ayinayo, kunjalo. Kodwa kuyefana nakubantu. Silahlekelwa isilinganiso sezinwele eziyikhulu nsuku zonke, bese kwenzeka okufanayo kubo ngoba kufanele bavuselele uboya babo.
Kepha okucacayo ukuthi, noma ngabe yizinwele zomuntu noma izinwele zezinja, akubukeki kahle ezingutsheni, kusofa, emotweni ... Futhi kunganikeza isithombe sokunganakwa kanye nenhlanzeko engeyinhle. Ngakho-ke, izindawo eziyinhloko endlini okufanele ugxile kuzo lapho uthenga okokukhipha izinwele yilezi ezilandelayo:
Usofa uvame ukutholakala egumbini lokuphumula futhi, uma ungayifundisanga inja ukuthi lesi isikhala sakho, kujwayelekile ukuthi ikhuphuke kuso, futhi ngalokho ishiya izinwele. Noma ungahambanga, ngokuzihlikihla entanjeni yabo, ungabashiya.
Kulezi zimo isikhululi sezinwele esihle kakhulu ongasisebenzisa yi-roller eyodwa, njengoba ukugijima ngaphezulu kuzokwenza izinto zibe lula kuwe ukuqeda yonke into. Okunye okungakusiza yilokho okuqondene nezingubo, usofa nezingubo.
Abantu abaningi basebenzisa uhlobo oluthile lwezingubo ukuze babe sekhaya kanti olunye ukuphuma. Kepha izinja ngokuvamile azikuqondi lokho futhi, ekugcineni, zisondela ekufuyweni noma nini lapho zingakwazi. Ngalesi sizathu, uma ugqoka izingubo zomgwaqo, ungathola izinwele eziningi ezonakalisa ukubukeka kwakho.
Isixazululo sokuyisusa? Izisusa izinwele zezingubo, usofa nokhaphethi, kanye namabhulashi okususa izinwele (yebo, ezingutsheni ezingantekenteke).
Ukhaphethi ungenye yezindawo lapho inja ingashiya khona izinwele eziningi, ngoba ilele phezulu, ngoba iyawagcoba, njll. Ngakho-ke ungazisusa kanjani izinwele singakutshela ukuthi ugxile kulokho eziyikho ethize kumata, okokugqoka nosofa. Uma nazo zinesigxobo se-telescopic, noma esikhulu, singcono kakhulu ngoba uzomboza indawo engaphezulu.
Ingabe uyisa inja yakho kudokotela wezilwane? Noma uma uphuma uyenza naye? Ekugcineni, okhaphethi nezihlalo kuzophela ngezinwele zenja yakho okufanele uzisuse.
Kulokhu, siphakamisa futhi lezo eziqondene nosofa, omata nezingubo ngoba zisebenza kahle kulezi zindawo. Kepha uma ukhetha olunye uhlobo, ukubheja kuma-roller.
Ingabe ukukhipha izinwele kwezinja kuyasebenza?
Ngeke sikutshele ukuthi ukukhipha izinwele kuzokuqeda nya ukuthi ubona izinwele kusofa, phansi noma ezingutsheni. Uma kungalungiswa imbangela ebangela inja yakho ukukhipha izinwele, ngeke uziqede.
Kepha singakutshela lokho ziyasebenza ngoba zisusa inani elikhulu lezinwele. Phakathi kokuxubha, nokuhlanzwa okuvamile (uma kungenjalo nsuku zonke), ungakhohlwa ngezinwele.
Ungathenga kuphi okokukhipha izinwele
Uma ufuna ukuqeda izinwele zezinja ingunaphakade, kungaba sezingutsheni zakho noma yikuphi lapho ihleli khona, nazi izitolo eziyinhloko lapho uzothola khona imikhiqizo.
AmazonI-Amazon mhlawumbe ingenye yezindawo zokuqala esiya kuzo lapho sifuna ukuthenga okuthile. Ngokuqondile, ekususeni izinwele uzokwazi ukukuthola izisusi ezahlukahlukene zezinwele, kusuka kumanuwali kuya kokuzenzekelayo.
IkeaE-Ikea banendaba nakho konke abakuthengisayo, yingakho ungathola okokukhipha izinwele kulabo abanezinja emakhaya ukuze ifenisha ingabukeki igcwele izinwele. Yebo kunjalo, abanayo ikhathalogu ebanzi kakhulu, kodwa yebo wekhwalithi.
kiwiko: I-Kiwoko ingesinye sezitolo esigxile kwimikhiqizo yezilwane ezifuywayo. Ngakho-ke, lapha unenketho yokuthola Izisusi zezinwele ezisebenza ngempela kulabo abanezinja.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izesekeli zezinja » Isisusi sezinwele
Ukudla kwezinja okulinganisiwe: yikuphi okungcono?